स्वर्ग जानेद्वारामा विभेद, तपाईं पनि पर्नु होला नि ! | MY OPINION:: MY PRIDE :: Rajendra Bishwakarma
स्वर्ग जानेद्वारामा विभेद, तपाईं पनि पर्नु होला नि !
जनवरी 12, 2007 by RAJENDRA BISHWAKARMA
हिन्दु धर्म मान्नेहरुको लागि अन्तिम पवित्र स्थल, जहाँ हिन्दु धर्मालम्बीहरु आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि आउन प्रयत्न गरिरहने स्थल हो पशुपतिनाथ । जीवनको कुनै अवस्थामा वा दिनमा पसुपतिको दर्शन गर्न पाईएमा वा गरिएमा जीवनमा शान्ति, शुख र पुण्य कमाईने विश्वास नेपाली समुदाय त्यसमा पनि अझ हिन्दु धर्मालम्बीहरुमा बढी पाईन्छ ।
जुन स्थलमा दर्सन मात्र गर्दा धेरै कुरा पाईने आशा गरिन्छ भने अझ यस संसारलाई छोडेर स्वर्गको दुनियाँमा प्रवेश गर्दा यसै स्थलबाट प्रवेश गर्न पाईएमा त झन कति पुण्य कमाईदो होला जस्तो तपाई हामी सबैलाई लाग्दछ र यो विश्वास सबैको पनि हो । यो संसारलाई छोडेर अर्को दुनियाँमा प्रवेश गर्दा जसले पनि सहजता, सम्मान र शान्ति पूर्बक विधाई चाहान्छ र जुन दुनियाँमा जाने हो त्यो दुनियाँमा सम्मान पूर्वक स्वागतको अपेक्षा राख्दछ । जसको आत्माले पनि सम्मान र शान्ति खोज्दछ । तर त्यो सम्मान र शान्ति जसले विधाई गर्न बसिरहेका छन् ’emले गर्नेहो ।
तर यहाँ(पशुपतिमा) आत्मालाई सम्मान र शान्ति दिने कार्य भएको पाईन्न । पशुपतिमा पशुपति विकास कोष समिति खडा गराई त्यहाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिने गरेको छ । जहाँ पशुपति विकास कोष अन्तर्गतको नै घाट सेबा पसल छ । सायद यसैले व्यवस्थापन गरे अनुसार घाटहरु व्यवस्थित गरिएका छन् । जस अनुसार पशुपतिमा २ वटा र ७ वटा घाट गरि जम्मा ९ वटा दाह संस्कार गर्ने घाटहरु रहेका छन् । तपाईलाई अचम्म लाग्ला एकै पटकमा ९ वटा घाट नलेखेर २ र ७ गरि लेखेको होला भनेर । यसमा पनि केहि लुकेको छ कि? जुन २ वटा घाटहरु पशुपति मन्दिरबाट पारिपट्टि जाने दुई बटा पुल रहेका छन् ति पुलको माथी पट्टि रहेका छन् भने ७ वटा घाटहरु ति पुल भन्दा तलतिर रहेका छन् ।
पशुपति बिकास कोषले व्यवस्थित गरि सबैला सजिलो होस भन्नाका लागि त्यहाँ दाह संस्कार गर्नु भन्दा पहिला नाम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जहाँ नाम दर्ता नगराईकन दाहसंस्कार गर्न पाईदैन । जब नाम दर्ता गराईन्छ तब मात्र पशुपति आर्य घाटमा दाहसंस्कार गर्न अनुमति पाईन्छ र दाहसंस्कार गर्ने घाटसम्म तोकि दिन्छ । घाट सेबा पसलले जुन घाट तोकि दिन्छ त्यो घाटमा मात्र तोकिएको लास दाहसंस्कार गर्नु पर्दछ ।
खै! खड्किएको र अचम्मको कुरा म जति पटक त्यो पशुपति आर्यघाटमा मेरा नजिकका साथीहरुको मानिसको दाहसंकार गर्न पुग्छु जति बेला पनि म एउटै घाटमा दाहसंस्कार गर्न पुगेको हुन्छु र देखेको हुन्छु । खै मलाई थाहा छैन सायद यो संयोग पर्न गएको हो कि । तर होईन रैछ । मैले त्यहाँ उपस्थित केहि मानिसहरुसंग सोधे र हामी केहि साथीहरु बिच छलफल पनि गरियो । कुरो के रहेछ भने त्यहाँ पनि घाटमा स्तरिकरण रहेछ । अघि उल्लेख गरेका २ वटा घाटहरुमा शाही परिवार, शाही नातेदार, राणा, कुलिन घर परिवारलाई दाहसंस्कार गर्ने त्यस पछिकामा पनि स्तरिकरण गरि उपाध्याय बाहुन, क्षेत्री हुदै घाटको स्तरिकरण गरेको बुझिन्छ । म परि रहने घाटको कुरा गर्दा अन्तिमतिरबाट गन्ने हो भने दोश्रो र अगाडिबाट गन्ने हो भने छैठौंमा पर्दछ ।
यसरी मैले बुझ्दै जादा जुन ठाँउमा दाहसंस्कार गर्ने व्यक्तिको नाम दर्ता गराईन्छ हो त्यो दर्ता गराउने ठाँउबाट बिभेदको रेखा केरिने संभावना रहेको पाईयो । नाम दर्ता गराउदा नाम, जात र थर लेखाउनु पर्दछ । जात र थर लेखाईए पछि दलित समुदायको हो भन्ने भए पछि अन्तिमतिरबाट गन्ने हो भने दोश्रो र अगाडिबाट गन्ने हो भने छैठौं घाटमा पारिदिने परिपाटी रहेको छ । यसरी पशुपति विकास कोषको पशुपति आर्यघाटलाई व्यवस्थित गर्न सकृय रहेको घाट सेवा पसलले नै बिभेद गर्नु कति उचित होला? यसरी बिभेद गर्नुको कारण त्यस पसलमा अतिवादी ब्रह्माणवादीहरु हुनु र ती अतिवादी ब्रह्माणवादीले छुवाछूतलाई मान्यता दिनु नै प्रमुख कारण हो । त्यसकारण राज्यको पुर्नसंरचना चलिरहेको बेला पशुपति बिकास कोषको व्यवस्थापन समितिमा पनि सबै वर्ग, समुदाय, लिंग, जातजातीको समावेशिकरण गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
← लौन अब त केही गरौं
म त मरॆको मान्छे →
2 thoughts on “स्वर्ग जानेद्वारामा विभेद, तपाईं पनि पर्नु होला नि !”
bal bahadur biswakarma on जनवरी 14, 2007 मा 3:32 अपराह्न said:
Jaat bhane ko ta science genetic kura ho…tesaile genetic conservation ra important hunchha ta..tehi valuable gene ko karan le garda ta gaida conservation project, tiger conservation project chhan ..kin biralo, kukur, musha conservation project chahina…ani sudda jaat ko genetic value nai arkai hunchha…pure gene bhane ko pure gene nai ho..aba dalit ko gene bhaye dalit bhayo ..malai scince biswas lagne hunale ma gene science ma pani biswas garchhu..ra jaat bhat ma pani biswas garchhu…gene conservation ko laagee bhaye pani yesma biswa garnu parchha….
Jaya Jaat Bhat Baadi Group
Maheswor Shrestha on जनवरी 17, 2007 मा 12:01 अपराह्न said:
हो,लेखकले सही लेख्नु भयो । यसलाई विभेदका शिकार सबैले पशुपति क्षेत्र विकास कोष समक्ष सशक्त विरोध गर्नु पर्छ र कोष व्यवस्थापनमै प्रतिनिधित्वका लागि दाबी गर्नु पर्छ।